Ndị kasị mma na kaadị ebe nchekwa data mgbake software
Mgbe ụfọdụ ọ bụ nnọọ ike n'ihi na onye ọrụ iji weghachite kaadị SIM data nke ukwuu n'ime agụnye na kọntaktị na ozi ederede. A nkuzi e mepụtara iji jide n'aka na ihe kasị mma omume na-ọ bụghị nanị na ẹkenam ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi knowhow nke na-eji ha. Ọ ga-bụghị naanị ime ka ndụ mfe n'ihi na onye ọrụ ma ga-mụbaa mmiri.
Irrecoverable faịlụ site na SIM kaadị
Ọ bụ-ahụ kwuru na omenala ụzọ pụrụ bụghị etinyere jide n'aka na SIM kaadị si data na-Ewepụtara na ọ bụ n'ihi na eziokwu na data jidesie n'elu na-ekpochi na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ọzọ utilities na software omume na-eji iji weghachite data. Ọ na-na-kwuru na kpọmkwem nlaghachie si SIM kaadị bụ mgbe mgbe o kwere omume na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị iji ụzọ na a ga-kọwara na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi iji jide n'aka na nke na-anọgide dịghị egwuregwu n'ihi na onye ọrụ. The utilities na a ga-kọwara na nke nkuzi ga-emekwa ka n'aka na irrecoverable faịlụ site SIM kaadị na-abụghị nanị mere recoverable ma data a na-amịpụtara na nke kacha mma n'ụzọ nke mere na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ịgbaso niile nzọụkwụ na e kwuru okwu ya na nkuzi dị ka ọ ga-edu ha kwupụta ngwọta na a jụụ ọma na enchanting n'ụzọ na-eme ka onye ọrụ iji na-enweta results na akara na chọrọ. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-mgbe ọsọsọp ma ọ bụ ọzọ faịlụ mgbake si SIM kaadị ga-adị nnọọ ike ọrụ ịrụ.
Naghachi gị data na nke kacha mma SIM kaadị data mgbake software
Wondershare Dr. Fone maka Android bụ otu n'ime nnọọ ọgụgụ isi na magburu software omume na e mepụtara site na Wondershare iji jide n'aka na needful a mere na onye ọrụ ọkọkpọhi data nke ụdị ọ bụla Ewepụtara n'ime-adịghị. Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ihe omume a na-kwalite izute achọ na mkpa nke ndị ọrụ na-ebilite na bụla na-agafe n'ụbọchị. Zuru ezu banyere ihe omume a na-kpọtụrụ aha ná Wondershare ukara website na onye ọrụ nwere ike ịga na ya iji jide n'aka na ndị ọzọ ozi na-zukọtara. Ọ bụkwa uru banyere na e nwere nnọọ ogologo ndepụta nke mobile ntị na e kwuru okwu na website ndị a bụ igwe na-akwado site na usoro ihe omume na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na usoro ihe omume bụ otu n'ime ihe kasị oru oma ma dị irè ndị na dị na ahịa.
The yiri usoro naghachi SIM kaadị data (nke bụ ejikari SMS ma ọ bụ kọntaktị) mgbake e kwuru n'okpuru ebe a iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na ike-eso usoro iji jide n'aka na ihe ndị a chọrọ nke onye ọrụ na-zutere:
1. The URL http://www.wondershare.com/data-recovery/android-data-recovery-guide.html bụ ike tinye n'ọrụ na-eme ka n'aka na exe faịlụ nke usoro ihe omume ebudatara:
2. na android ngwaọrụ onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ụzọ na e kwuru n'okpuru na-soro na-usoro aga:
Ntọala "> pịa" Ngwa "> pịa" Development "> ego" USB debugging
3. The ngwaọrụ nyochaa ogbo ga-ahụ ga malitere dị ka ihe ọganihu:
4. The faịlụ ụdị a ga-ahọrọ. Dị ka SIM kaadị a na-eji iji weghachite data otú ozi ederede ụdị ga-ahọrọ ka n'ihu:
5. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị ezipụta na scanning mode maka data mgbake na ebe ọ bụ banyere oke nke onye ọrụ. N'ókè nke na a ga-kwuru bụ na elu mode nwere ike na-ahuta ka miri iṅomi ma ọ na-ewe ogologo oge na-eme ka onye ọrụ na-eche ihe dị ka tụnyere ọkọlọtọ mode na e agbakwunyere:
6. The usoro ga weghachite niile data nke SMS si SIM kaadị nakwa dị ka na ekwentị mkpanaaka na jide n'aka na needful a mere:
7. Onye ọrụ ugbu a kwesịrị iji jide n'aka na ozi na a ga-natara a pịrị ma ọ bụ na-enyocha ma na ndị ọzọ chịkwaghị. Ka anya dị ka naghachi button a na-ahụ-enwe ndị software ga-ahụ na ndị niile na ozi ederede na na-enyocha na-natara na nke a kwa okokụre usoro na zuru.
Gịnị stof na-echekwara na kaadị SIM?
SIM anọchi Ijirimara na maka otu ihe ahụ ọ bụ ihe kasị mma na ndị kasị elu GSM nkà na ụzụ na e mepụtara. Ọ na-eme n'aka na data na-Ewepụtara bụghị naanị site na nso BTS ma n'ókè na-na-ejikarị kwupụta subscriber si mobile. The stof na-echekwara jidesie kaadị SIM dabere n'elu oke nke ụgbọelu ma ọ bụ nhọrọ na e nyere onye ọrụ na nke a. Ọtụtụ n'ime ndị cellular rụọ na-arụ ọrụ n'ụwa nile na-ahụ na ndabara kọntaktị na SMS na-echekwara ndị SIM na ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere n'elu usoro nke SMS nlaghachie e kọwara na iji Wondershare Dr. Fone maka Android .
Olee ụdị data ka ị chọrọ iji weghachite si na kaadị SIM gị?
Ka e kọwara tupu nakwa na abụọ na ụdị data echekwara jidesie kaadị SIM bụ kọntaktị nakwa dị ka SMS na ha abụọ bụ ndị dị nnọọ mkpa n'ihi na onye ọrụ mgbe ọ na-abịa data icheta ya. Ọ bụrụ na a nghoputa a mụụrụ na nke a mgbe ahụ n'ihi ga-100% ọrụ sị SMS na 100% nke ha si kọntaktị. Mere, nke a nghoputa dokwara na ihu ọma nke ndị data na e kwuru okwu ya.
> Resource> Kaadị ebe nchekwa> The kasị mma SIM kaadị data mgbake software